admin – Page 30 – hoo!haa!!
BANYERE ALỤM DI NA NWUNYE
BANYERE ALỤM DI NA NWUNYERead More →
LEGỌS:AKWỤLA EJIDEWO ONYE UWE OJII JỤRỤ ỊKWỤ YA “ỤGWỌ ỌRỤ” YA
Legọs: Otu akwụla aha ya bụ Betty nwụchiri onye uweojii n’ihu ọha ụnyahụ bụ Ụka abalị anọ nke ọnwa Ọgọọst na Lekki, Legọs Steeti maka na o kweghị akwụ ya “ụgwọ ọrụ” ya. Ya bu onye uweojii kpọrọ onye akwụla ahụ ga tigworie n’ákwà di na beya. Tupu ha gawa,Read More →
ỌZỌ EMEKWAA N’ENUGWU:NDỊ NCHỊ EHI ATỌRỌWO IGWE NA LỌLỌ YA
Enugwu: Ka ana-eti mkpu maka Fada ha gburu, ndi nchị ehi atọrọla onye eze ọdịnala na mgbede taa u Sọnde, abalị anọ nke ọnwa Ọgọọst. Ha tọọrọ Igwe Sunday Ọjị nke Obom-Agbogugu, dị n’okpuru ọchịchị Ògwù na Lọlọ ya n’Ụmụọgba, Ihe ka ha so ụzọ awara awara Enugwu – PọtRead More →
ANYỊ HỤSIRI ANYỊ N’AKA NDỊ FULANI NDỊ NTỌ-NWA GIRINGORI
Abiokuta: Nwa Jemis Irọha, onye a maara dịka Giringori n’ejije wuru ewu oge gara aga bụ “New Masquerade” ekwuola na ya na ndị ọzọ ndị ntọ ndị Fulani tọọrọ hụsiri anya. Nwamadị a so n’ime ndị Uwe ojii zọpụtara n’aka ndị ntọ kwuru nke a oge ọ gwara ndị ntaRead More →
AGBAGBUOLA ONYEISI MIYETTI ALLAH
Yola: A gbagbuola onyeisi otu Miyetti Allah, ngalaba Ndịda Adamawa bụ Alahaji Saidu Kolaku ụbọchị Satọdee, abalị atọ nke ọnwa Ọgọọst. Otu onye otu Miyetti Allah na steeti ahụ tinyekwara ndị ọzọ ọnụ na-eru n’okwu na-ahụta ogbugbu ya dịka ịbọ ọbọ megide ndị otu ha. Ọnụ na-ekwuru Ndị Uwe OjiiRead More →
EJIDELA NDỊ A SỊ GBURU FADA OFU
Enugwu : Ndi Uwe ojii ejidela ụfọdụ ndị a na-enyo enyo na ha bụ ndị gbagburu Ụkọchukwu Pọl Ofu. Kaosiladi, ha ekwughị ndị ndị ahụ bụ ma ọ bụkwanụ ole ha dị ruo oge anyị zipụrụ ozi a. N’okwu ya ụbọchị Satọdee, abalị atọ nke ọnwa Ọgọọst, Kọmishọna Ndị UweRead More →
SAỤT AFRỊKA:AGBAGBUOLA ONYE IGBO ỌZỌ
Saụt Afrịka: Ndi oji egbe gbagburu otu nwoke onye Igbo ọzọ n’isi ụtụtụ taa, abalị atọ nke ọnwa Ọgọọst na Johanesbọg, Saụt Afrịka. Nwoke a bụ Benjamin Saịmọn Okoronkwọ, onye Ebọnyị Steeti bụ onye na-anya ụgbọ ala n’ụlọ ọrụ taxify. Nwoke ahụ nọ n’ime ụgbọala ya mgbe ndị ahụ gbagburuRead More →
BNYL EMENINAALA NDỊ FULANI 2,EHI 20
Kalaba: Ègwù dị ugbua na obodo dị n’ikpere mmiri Itu n’okpuru ọchịchị Odukpani nke Krọs Riva Steeti ebe ndị a na-eche na ha bụ ndị otu Biafra Nations Youth League, BNYL, na ndị Fulani na-achị ehi na-akwarịta mgbọ. hoo!haa!! na o teela ndị Fulani na-achị ehi ji echi ndị obodoRead More →
IME NGAGHARỊ IWE:AKPỤRỤLA SOWORE
Legọs : Ozi hoo!haa!! nwetara bụ na ndị ọrụ nchekwa DSS nọrọ n’ụtụtụ taa were kpụrụ Mazị Omoyele Sowore bụ onye ji aha otu ndọrọndọrọ ọchịchị AAC zọọ ọkwa na nhọpụta onyeisiala emere n’ọnwa Febrụwarị a be ya na Legọs. Ihe e ji kpụrụ ya bụ maka ngagharị iwe mgbanweRead More →
WAMMAKO: ONYE OHI, ANA-ACHỤ ONYE OHI?
Abụja: Onye ohi a na-achụ onye ohi? Mba. Mana Sineti ala anyị emeela Sinetọ na anochite anya mpaghara Mgbago Ugwu Sokoto, Aliyu WAMMAKO onyeisioche Kọmitii na-ahụ maka EFCC n’agbanyeghị na ụlọ ọrụ EFCC na-enyocha ya bụ nwa amadị maka iri ngarị Njeri Naira Iri n’ise (N15billion) Nwa amadi a buRead More →
“ONE CHANCE” : AKA AKPARALA MADỤ ANỌ N’ỌNỊCHA
Onye nta akụkọ – Chụkwụdị Okeke Ọnịcha: Mmadụ anọ ji ụgbọala, ya bụ ndị “One Chance” ka a nwuchirikọrọ na Nkwele Ezunaka dịdebere Ọnịcha ụnyahụ bụ Tọọzdee, abalị mbụ nke ọnwa Ọgọọst oge ha chọrọ ịnapụ otu nwanyi ihe karịrị Narị Puku Naịra iri anọ (N400,000). Nwanyị a aha yaRead More →
NDI NCHỊ EHI AGBAGBUOLA FADA ỌZỌ
Onye nta akụkọ – Chụkwụdị Okeke Enugwu: Njinji jiri ụnyahụ oge ndị e chere na ha bụ ndị Fulani na-achị ehi gbagburu ụkọchukwu ndị Katọliki n’Enugwu na mgbede Tọọzdee abalị abụọ nke ọnwa Ọgọọst. Fada Pọl Ofu ka a gbagburu ka o ji ụgbọala aga n’ụzọ si Agbụdụ aga IheRead More →
ORINGO AJỌKA! A TỌGBURU NWA AGBỌGHỌ N’ỤLỌ NKWARI AKỤ
Pọt Haakọt: Otu nwata nwa agbọghọ ka anyị nụrụ na enwetara ozu ya n’isi ụtụtụ taa bụ Tọọzdee, abalị mbụ nke ọnwa Ọgọọst n’ime ụlọ ndina dị n’ụlọ nkwari akụ nọ na mpaghara D Line na Pọt Haakọt. Nwa agbọghọ ahụ nke a chọpụtara na ahụ ya bụ Maureen Ewuru,Read More →
AGHA BOKO HARAM:GỌỌMENTI, ASỊ AKARỊA
Meiduguri: Igbo sị na “asị gwụ ekperime n’ọnụ, a kpụrụ ya gbuo”. Ka ọ dị taa, asị Gọọmenti Etiti na-asịzi maka agha Boko Haram mere na a maghịzi nke bụ eziokwu. Ozi hoo!haa!! nwetara site na-egosi na enweghị eziokwu ọbụla dị n’okwu Onyeisiala Muhammadu Buhari oge gara aga oge ọRead More →
BỊAFRA:ỌNWỤKA EMEELA ONWE YA EZE
Enugwu : Ọkaiwu Benjamin Ọnwụka, Onye ndu otu Biafra Zionists Federation (BZF), emeela onwe ya Onyeisiala Bịafra, n’agbanyeghị na e nwetebeghi ya bụ mba Bịafra. O kwupụtara nkea n’ozi o zigara ndị nta akụkọ ka ndị Uwe ojii gbochiri ya idu onwe ya n’iyi ọrụ dịka Onyeisiala Bịafra n’Enugwu n’ụbọchịRead More →